China PE / PP firimu inodzvinya muchina vagadziri uye vanotengesa | Kupfuma Mashini
1.Kusvina mushini dhiramu hapana kudikanwa kwekurapwa ne38Crmoal, nekuti fricton chikamu chiri pamusoro.
2.Kusvina mushini dhiramu dhizaini, pamusoro, iyo dhiramu ichave ichaboora mamwe madiki maburi.mukati gomba rinenge 3mm, kunze kungangoita 6mm.
3.Mukati mekusvina muchina wedhiramu vane mashanu pcs Keyway, (mufananidzo 300 mhando, uine 6 pcs Keyway),
4.Iye inosvina muchina Screw zvinhu zvinofanirwa kuve ne38Crmoal, rigidy yakakwira, Yakanaka abrasion kuramba.
5.Kusvina mushini sikuru dhizaini naVIRI-IN-ONE, vachishandisa mutengo wakaderera.
6.Makomba eforoma yekusvina muchina anogona kuchinjika